Inona no jerena ao Cala Llombard, Mallorca | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | España, General, tora-pasika
La Ny moron-dranomasin'i Cala Llombards dia any Mallorca, any amin'ny faritra atsimo atsinanana, kilometatra vitsivitsy monja miala an'i Santanyí sy ao anatin'io tanàna io. Raha afaka mahita zavatra ao amin'ny Mallorca isika, dia io tokoa ny coves maro an'isa ao aminy, izay matetika dia kely nefa manintona. Ny fitsidihana ireo zana-boribory tsara indrindra dia ilaina tokoa rehefa mitsidika ity nosy ity isika.
Ao amin'ny nosy Mallorca dia manana zavatra maro hatao isika fa ny iray amin'ireo malaza indrindra nefa tsy isalasalana dia ny fitsidihany ny torapasika sy ny lava-bolany tsara indrindra, izay manana firavaka Mediterane tokana. Ireo toerana ireo, toa an'i Cala Llombards, dia manana rano turquoise ary manome paradisa kely handaniantsika ny andro.
1 Inona no tokony ho fantatrao momba an'i Cala Llombard
2 Inona no hankafizinao ao amin'ny Cala Llombard
3 Inona no jerena akaiky an'i Cala Llombard
3.2 Valan-javaboary Mondragó
3.3 Cocves akaiky
Inona no tokony ho fantatrao momba an'i Cala Llombard
Ao Mallorca dia misy a Coves tsara tarehy be dia be izay mendrika hitsidika an'i Cala Llombard dia iray amin'izany. Ity cove ity dia manana toetra mampiavaka azy. Manolotra toerana fijanonana mora sy akaikin'ny faritra fasika io. Izany no antony mahatonga ny cove iray izay safidin'ny fianakaviana maro hankafy ny andro feno masoandro. Maimaimpoana sy malalaka ny fijanonana, na dia tsy misy fitateram-bahoaka akory aza mankany amin'ny cove, ka tsy maintsy manofa fiara isika raha mitsangatsangana ary te hahita azy. Izy io dia manana trano somary avo mandritra ny fahavaratra, koa raha te hanana toerana tsara isika dia tsy maintsy mandeha aloha. Ity cove ity koa dia manana faritra arovana mafy amin'ny vatolampy, izay mahatonga ny ranony milamina tsara, toetra iray hafa izay mety aminy ho an'ny fianakaviana manan-janaka kely.
Raha ny serivisy izay hitantsika amin'ity cove ity dia samy hafa izy ireo. Izany dia azo atao ny manofa elo sy sunbeds ho an'ny fampiononana ambony. Na izany aza, tsy moron-dranomasina nametrahan'izy ireo tolotra be loatra izany, fisorohana ny fananganana rafitra hafa satria faritra voajanahary tsara tarehy izy io. Afaka mahita tranon'ny mpanjono sasany ianao ary misy bara kely amoron-dranomasina ahafahanao mividy zavatra vitsivitsy. Saingy tsy misy serivisy ho an'ny fanatanjahantena rano, na dia morontsiraka kely aza izy io ho an'ity karazan-javatra ity.
Inona no hankafizinao ao amin'ny Cala Llombard
Ity cove kely ity dia toerana iray malaza ho an'ny mpizahatany ka fantatray fa be dia be ny olona. Na izany aza, morontsiraka izany fa tsy tena malalaka izay miitatra miverina, manoloana ny faritry ny ala kesika izay ahafahantsika mahita alokaloka. Cove tonga lafatra ny fandanianao ny andro satria faritra manaloka izy noho ny ala kesika, izay ahafahantsika manao piknik mahafinaritra. Ankoatr'izay, voahodidin'ny faritra be vato izay misy olona be herim-po manapa-kevitra ny hitsambikina ao anaty rano. Ity hevitra ity dia tsy mety afa-tsy amin'ny be fahasaharana indrindra fa mahafinaritra be ary ho hitantsika ny olona manao an'io mandritra ny taona. Etsy ankilany, zana-kazo madiodio izy io izay misy rano turquoise mangarahara toy ny any amin'ny lava-bato hafa any Mallorca, izay ahafahantsika manao fanatanjahan-tena toy ny snorkeling.
Inona no jerena akaiky an'i Cala Llombard
Raha handany ny andro amin'izany isika cove dia tsy maintsy hahita ny manodidina ihany koa isika. Raha mandany andro maromaro any atsimon'i Mallorca isika dia afaka mahita zavatra mahaliana. Avy amin'ny tanàna ka hatrany amin'ny coves hafa izay tianay ny mandany andro tsara eo amoron-dranomasina.
Ity tanàna kely ity 10 kilometatra monja miala an'i Cala Llombard no misy azy, manao azy ho toerana tsara hipetrahana. Ity tanàna ity dia manana tanàna antitra tsara tarehy misy rindrina mimanda ary fidirana antsoina hoe Porta Murdada. Mandritra ny sabotsy dia misy tsena lehibe ahafahanao mividy zavatra isan-karazany. Ao amin'ny tanàna dia misy ihany koa ny trano fisakafoanana tsara hanandramana ny gastronomie matsiro.
Fitsidihana manan-danja iray hafa ao amin'ny faritra dia ahitana ny mahita ny Mondragó Natural Park. Ity faritra voajanahary voaaro ity dia manolotra tondrozotra hahitana ny zavamaniry sy ny fiompiana manodidina. Ao amin'io faritra io dia misy ihany koa ny iray amin'ireo lava-bato manandanja indrindra amin'ny Mallorca rehetra, Cala Mondragó. Malalaka ity vala ity ary manome rano mangarahara. Raha te-hanao hetsika isika, dia afaka mankafy làlan-kaleha toy ny Punta de Ses Gavotes na ny Mirador de Ses Fonts de N'alis. Ireo làlana ireo dia mety amin'ny fianakaviana ary azo atao an-tongotra na bisikileta. Izy io dia faritra voajanahary tsara tarehy any Mallorca tena akaiky an'ity Cala Llombards ity.
Iray amin'ireo Ny zaridaina malaza indrindra ankoatr'izay efa voalaza dia Cala d'es Moro, izay tratra amin'ny alàlan'ny lalana kely miala amin'ny toeram-piantsonana. Izy io dia vatosoa voajanahary eo amin'ireo vatolampy. Ny iray amin'ireo lava-bato azo zahana dia i Cala S'Almonia, faritra misy hantsam-bato, aloka noho ny faritra ala kesika sy rano madio. Izy io dia morontsiraka mahafinaritra ihany koa izay tsy dia andehanan'ny mpizahatany ka mendrika jerena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Cala Llombards any Mallorca